Ka nsogbu nchekwa na-akawanye njọ, ndịda ọdịda anyanwụ na-achọ ka Amotekun tinyekwuo aka
Ndị bi na steeti ndịda ọdịda anyanwụ nke Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo, Osun, na Oyo na-akpọ Amotekun, onye na-ahụ maka nchebe mpaghara, ka ọ gbalịsie ike ịlụso mpụ na mpaghara ahụ ọgụ, ọkachasị ịtọrọ mmadụ na ịpụnara mmadụ ihe.
Ọtụtụ mmadụ na-azọrọ na onwebeghị ihe ọdịla mma n'ihe gbasara nchekwa ndụ na ihe onwunwe kemgbe mmalite uwe ahụ n'afọ gara aga.
Amotekun na-agagharị n’ofe mpaghara geopolitical, ewezuga Lagos Steeti, ebe ndị Neighborhood Safety Corps nwere puku ndị ọrụ asaa nọ na steeti ahụ.
Ndị isi ọrụ nchekwa ahụ kwenyere The Nation na ha ka nwere ọtụtụ ọrụ ha ga-arụ, mana na ha chọrọ akụrụngwa zuru oke ma zuru oke iji bie ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ.
Ọnụọgụ mmadụ na-eyi egwu dị egwu na steeti Ekiti, ebe okporo ụzọ dịka Igbara Odo-Ikere, Aramoko-Erio-Efon, Efon-Iwaraja, Akure-Ikere, Ado-Ijan, na Ise-Ikere aghọọla mpaghara na-adịghị aga maka ndị a. ike gwụrụ n'ihi ọrụ ndị ịtọrọ mmadụ.
Ọ dịkarịa ala mmadụ iri anwụwo n'ụzọ jọgburu onwe ya na steeti na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ebe ndị ọchịehi tọọrọ puku kwuru puku, gụnyere ndị ọchịchị ọdịnala, ndị ọrụ gọọmentị, na ndị ọzọ a ma ama.
Oba David Oyewunmi, onye Obadu nke Ilemeso na okpuru ochichi ochichi ochichi nke Oye (LGA), ndi mmadu isii jidere n’ulo ya n’abali iri na ise n’onwa Eprel.
Nke ahụ bụ naanị otu izu mgbe Oba Adetutu gachara Ajayi, Elewu nke Ewu Ekiti, gbara ọsọ gbapụrụ ntọrọ na ụzọ Ewu-Ayetoro.
Mgbe ndị eze ọdịnala abụọ ahụ ka dị ndụ ịkọ akụkọ ha, Olufon nke Ifon na agbataobi Ondo State, Oba Israel Adeusi, adịghị ndụ.
Egburu Adeusi na Nọvemba 26, 2020, n'okporo ụzọ Ifon-Benin dị na Elegbaka.
Maazị Abdullateef Omoboriowo, bụ onye ndu obodo Ekiti steeti, enweghị afọ ojuju maka mmeri Amotekun nwere na steeti ahụ.
Ọ na-ekwu na mbughachi mpụ na steeti ahụ, yana ọrụ na-enweghị mgbochi nke ndị omekome, etinyela Amotekun Corps enyo, na-ekwupụta ụta na, n'agbanyeghị mmalite nke ọrụ ha, ụmụ amaala Ekiti enweghị ike ihi ụra na anya ha abụọ mechiri. .
Ọ chọrọ ka Amotekun gawa ndị ntọrọ na steeti.
Dị ka Mr Oladokun Oladiran si kwuo, Onye mkpọkọta nke Igangan Development Advocates na Oyo State, Amotekun dị ka onye anaghị arụ ọrụ.
"Dabere na ihe ndị mere na steeti, o doro anya na Amotekun emezughị ịrụ ọrụ iwu ya, nke bụ isi na-echekwa ndụ na ihe onwunwe," ka Oladiran gwara The Nation.
O kwuru, sị, "Ha arụzuala ihe ndị mmadụ tụrụ anya ha." Ọtụtụ ndị chere na ọ ga-enyere anyị aka ịnagide nsogbu nchekwa anyị na-eche ihu mgbe e guzobere ya, mana otu afọ gachara, nke ọzọ emeela. A nọchibidoro Ekiti ugbu a, na-eme ka ọ ghara ikwe omume ndị mmadụ ịga ọrụ na njem. "
“Ọ dị ka ha na-agba ọsọ n’ọkwa dị ala karịa ikike na ikike ha. Gịnị kpatara nke a? Gịnị mere anyị ji nwee ọtụtụ ụmụ nwoke? Kedu ihe kpatara anyị ji nwee akụ na ụba mmadụ niile a mana anaghị eji ha eme ihe kpamkpam na nchedo nke ezubere ha inye? Nke ahụ bụ ajụjụ.
“Mụ na ọtụtụ n’ime ha emekọọla ihe; ha nwere ike. Ha niile ruru eru. Ha ma ókèala ha, marakwa ebe ndị e kenyere ha ọrụ, ebe ndị na-amachaghị ha ka nwere ike iso ndị nke ochie ahụ akpakọrịta.
“Ihe niile dị mma, tinyere etemeete. Amotekun na-egosi na ọ dị ezigbo mma na atụmatụ ahụ, mana enwere nsogbu: ya FG emetụla ntọala ahụ. Ka anyị na ụfọdụ n'ime ha na-emekọrịta ihe, ha na-eme mkpesa etu ha nwetagoro, etu a anụbeghị maka ha, na anyị niile nwere ike ịhụ ya mgbe anyị lere ha anya. "
Dabere na Mazi Taiwo Adeagbo, onye ode akwukwo nke ndi oru ugbo (Akowe Agbe) na Ibarapa North Local Government Area, Oyo State, ọtụtụ ndị otu uwe nchekwa enweghị nkà na ihe ọmụma banyere gburugburu ebe ha na-arụ ọrụ.
Ọ kọọrọ nke a na enyo nnyonye anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
O boro ndị ọrụ ahụ ebubo na ha dị mpako ma jụkwa iso ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-ekwu na nke a butere enweghị ike ha ilebara nsogbu enweghị nchekwa mpaghara ahụ anya.
"Nsogbu bụ na ndị otu na-amụ anya na mpaghara dị ike karịa Amotekun dị na Ibarapa North Local Government," Adeagbo kọwara. Ndị nche ọchịchị ime obodo na-adị irè karị ma na-akpachapụ anya karịa Amotekun.
“Mgbe ihe mere ma kpọọ ndị mmadụ ka ha gaa ebe ahụ, ndị Amotekun Corps ga na-adọkpụ ụkwụ ha. Ha na-akpasu anyị iwe mgbe niile. Nwere ike nweta nkwenye site na mpaghara DPO. Amotekun enweghị nzube na Ibarapa North. ”
Ọ tụrụ aro ka gọọmentị goro “ezigbo ndị dinta” maka Amotekun.
"Ndị dinta ahụ maara ọhịa, ọhịa, na ime ụlọ nke ọ na-enweghị onye ọzọ maara, ọkachasị etu ha si ejikọta ọnụ dị ka otu, nke bụ uru dị n'ịlụ ọgụ megide mpụ."
General Kunle Togun (rtd), Onye isi oche nke Amotekun na Oyo State, na Onye isi Ndụ Olayanju (onye Colonel lara ezumike nka), ha abụọ jụrụ ịgwa The Nation okwu.
Brig-Gen. Joe Komolafe (rtd), Amotekun ọchịagha na steeti Ekiti kwetara na "akpa nke mpụ" emeela na steeti ahụ kemgbe ekike uwe nchekwa ahụ, mana o kwuru, "Anyị ekpochapụla ndị omekome ọhịa anyị."
Ọ sịrị, "Ọ bụrụ na ị nyara ụgbọala n'okporo ụzọ awara awara anyị, ị ga-ahụ ndị nwoke anyị na-agagharị agagharị, anyị na-ejide ndị na-atọrọ mmadụ n'oké ọhịa ma nyefee ha n'aka ndị uwe ojii maka ikpe ha,"
Otu n’ime ihe ọ rụpụtara n’oge na-adịbeghị anya bụ nwuchi mmadụ atọ a na-ebo ebubo na ha so na mgbanaka ịtọrọ mmadụ na-atụ steeti egwu. N’isochi nwachi idina nwaanyị n’okporo ụzọ Erinjiyan-Igbara Odo, ndị uwe ojii jidere ndị ahụ a nwụchiri bụ ndị a nwụchiri n’ime Igbara-Odo na Steeti South West Council Council.
“Ndị a na-enyo enyo, Abubakar Musa, 25, Yussuf Lawal, 20, na Babangida Usman, 30, tụgharịrị nye ndị ọrụ iwu obodo maka ikpe.
N'otu aka ahụ, Amotekun nwudoro mmadụ anọ eboro ebubo na ha bụ ndị ntọrọ na Jenụwarị 22. Ndị a na-enyo enyo, aha ha bụ Sheu Usman, Abubakar Babangida, Abubakar Sule, na Sheu Mamuda, ka anwụchiri n'oge ndị nchekwa na-agagharị mgbe niile na Eda Oniyo, Ilejemeje Local Government Area nke steeti ahụ. .
Komolafe kwenyere na ọ bụrụ na enyere ndị agha ahụ ego, ngwa agha, na teknụzụ dị elu dị ka drones maka nyocha na nleba anya nke ebe ndị omekome, ọ ga-eme nke ọma karịa ka ọ na-eme ugbu a.
Komolafe gara n’ihu kwuo na ọ ga-esiri ndị ahụ ike ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’ụkpụrụ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ha ejighị égbè, na-ekwu na ndị omekome na-ebibi steeti na-eji ngwa ọgụ dị egwu.
Ekwuru na Amotekun dị na Ondo Steeti nwekwara nnukwu ego.
Chief Adetunji Adeyeye, Onye isi ozu ahụ, gwara The Nation na ọ bụrụ na enweghị ego zuru oke, ọ ga-esiri ndị ozu ike inweta akụrụngwa maka ndị ọrụ ya iji rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ na-ekwu, sị: “Isi nsogbu anyị nwere metụtara ngwa ọrụ. Anyị chọrọ akụrụngwa nsuso dị mma. Nke a bụ nsogbu nwere ike ịmalite site na enweghị ego.
“Ego ọrụ nchekwa nwere ike isi ike. Gọvanọ Akeredolu na-eme ihe niile o nwere ike ime. Anyị enwetala ụgbọ ala na ụfọdụ ngwaọrụ eji arụ ọrụ, mana anyị na-atụ anya ịzụta akụrụngwa nleba anya kacha ọhụrụ.
“Otú ọ dị, Gọvanọ Akeredolu enyela iwu ka e mepụta Fund Trust Trust. Ha bụ, ekwenyere m, na-arụ ọrụ na ya. Onye ọ bụla na-eche banyere nchebe. Enweghị ike ịba ụba akụ na ụba belụsọ ma enwere nchekwa zuru oke. "
N'agbanyeghị ihe ịma aka ahụ, Adeyeye kwuru na ndị agha ahụ gara nke ọma idozi ihe karịrị mmadụ 500 gosipụtara n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ, na-akwụ ụgwọ.
O kwuru, sị: “Anyị nwere ike idozi ọtụtụ okwu.
“Tupu anyị erute, égbè ezu ohi na mmebi iwu ndị ọzọ bụ ihe a na-eme na Akure na ebe ndị ọzọ. Mpụ na omekome agbadatala kemgbe anyị malitere Ọrụ Nhicha. Anyị bugara ọgụ ahụ gaa n'ọba ha wee chụpụ ha. Anyị bụ naanị ndị mere ihe dị iche.
“Anyị nwere ndị ọrụ anyị na nchịkọta ọgụgụ isi, mana anyị na-echekwa aha na njirimara nke ndị ọrụ ubi anyị. N’obodo obula n’ime Ondo Steeti, anyi nwere ọgụgụ isi ma ndi nke aka n’eme ma nke n’adighi nma.
“Anyị so ná ndị mbụ malitere ịgba akwụkwọ. Anyị nwere ihe karịrị 17 ikpe metụtara ihe karịrị 100 ndị mmadụ na ụlọ ọrụ mgbazi.
“Anyị na-agbasi mbọ ike imezu ebumnuche anyị, nke bụ ịgbakwunye mbọ ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ. Anyị na-eme ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma mgbe a na-akpọ anyị nsogbu. ”
Alhaji Bello Garuba, Onye isi oche nke Ondo State Miyetti Allah, kwuru na Amotekun Corps nyeere ndị na-azụ anụ aka iweghachite ehi na-apụnara mmadụ ihe na steeti Osun.
Garuba, onye tokwara Ondo Amotekun Corps maka ịlụso mpụ ọgụ, kwuru na ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na steeti ugbu a nwere ahụ ike.
Onye oru ugbo Aishat Ali nke obodo Ero na Ifedore Local Government Area bụ ihe ọzọ na nke a.
Ehi atawo nri n'ubi ya, na-ebibi ihe ọkụkụ ya ụbọchị ole na ole tupu owuwe ihe ubi.
O nweghi ike ịmata ndị na-azụrụ ya anụ makana ha na-agakarị steeti Kogi na Osun.
N’ọnwa gara aga, ndị na-azụ anụ a laghachiri Ero ma wakporo n’ugbo Aishat. Ọ kpọrọ ndị ọrụ nchekwa obodo steeti ozugbo ozugbo, ha kpọchiri ndị na-azụ ha ma nara ha ehi ha.
Tupu ehi ha agbapụta, ndị na-azụ anụ kwụrụ ụgwọ kwụọ Aishat ụgwọ.
Aishat bụ otu n’ime ndị ọrụ ugbo karịrị narị ise na Ondo Steeti bụ ndị Amotekun Corps nyeere aka n’inweta akwụ ụgwọ maka mbibi ala ubi ha n’afọ gara aga.
Maazị Olaoluwa Meshack kwuru na ịdị adị Amotekun emela ka ndị omekome nọ na steeti ahụ tụọ egwu.
Meshack gwara gọọmentị steeti ahụ ka ha zụkwuo akụrụngwa maka ọrụ Amotekun iji luso mpụ ọgụ tupu ya emee.
Abayomi Adesanya, onye ọrụ ugbo na Ogun State na Yewa North Local Government Area, kwuru na ọnụnọ Amotekun enyerela aka weghachite ntụkwasị obi ụfọdụ na mpaghara steeti ahụ. Agbanyeghị, ọ sịkwara na chi ejibeghị n’oge ahụ ịtụle ndị ozu.
Amotekun ọchịagha ahụ lara ezumike nká Kọmitii nke ndị uwe ojii David Akinremi, agwala ndị bi na Ogun na ụmụ amaala ka ha mụrụ anya dịka ụzọ izizi ndị ọrụ Corps 120 ka etinyegoro na mpaghara ọchịchị isii - Ipokia, Imeko - Afon, Yewa North, Sagamu, Ijebu - Ode, na Ijebu North.
Ọ kọwara na nkwadebe na mmejuputa iwu ga-aga n'ihu na-eme ya n'usoro dịka usoro ogbugba ndu COVID - 19.
General Bashir Adewinbi, onye isi Corps nke Osun Security Network, gwara The Nation na ndi otu ya mere “nke oma nke oma mgbe obula na nchekwa nke steeti.”
“N’oge COVID-19, mgbe ndị ọchịchị nyere iwu ka mkpọchi, anyị nyochara nbata ndị mmadụ na-abanye na steeti, ”ọ kọwara.
“Mgbe Ilobu na Erin Osun tinyere aka na esemokwu agbụrụ, anyị nyere nnukwu aka na iweghachi udo. Anyị nyere aka n'ịzọpụta ndị a tọọrọ na ijide ndị a na-enyo enyo.
“Anyị esorowo ndị uwe ojii, ndị otu na-amụ anya, ndị dinta, na ndị ọzọ rụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na echekwara ndị Osun. Anyị onwe anyị sonyere na ịtọrọ mmadụ na Ikireogbugbu mmadụ na Wasinmi, na ihe ndị ọzọ. ”
Ka osila dị, a kọọrọ na ndị dinta n’ogbe ahụ, tinyekwara ndị otu Oodua Peoples Congress (OPC), enweghị afọ ojuju na ndị ozu maka ebubo ịkwụ ha oge ọ bụla ha wepụtara onwe ha maka ọrụ.
Dị ka akụkọ si kwuo, mmadụ asaa so na National Union of Road Transport Workers atọrọ na nkwụsị Iwaraja na Ilesha/Akure expressway wee napụta ya.
Dịka akụkọ siri kwuo, a manyere ndị OPC ịpụ n'ihi na onweghị ihe emere maka ọdịmma ha.
Why is Amotekun - Sanwo-Olu ọ bụghị na Lagos?
Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu nke Lagos Steeti kwuru n’oge na-adịbeghị anya na n’ihi “ụdị ọdịdị dị iche iche nke Lagos,” steeti na-ahọrọ ịrụ ọrụ nke ọ kpọrọ Lagos Neighborhood Safety Corps, nke na-arụ ọrụ otu ọrụ ahụ dịka Amotekun na ndị ọzọ akụkụ nke Southwest.
"N'ihe banyere Lagos, ọ bụ naanị mgbanwe aha," ka o kwuru na Channels Television.
Ọ sịrị, "Enwere m mmasị n'ihe ndị gọọmentị ibe m na-eme, ha ghọtara ihe dị iche na Lagos," ka o kwuru.
“Enwere m ihe karịrị ndị ọrụ nchekwa puku asaa na Lagos na-eme ihe Amotekun na-eme.
“Ha nọ n’ọdụ oke oke, na-enye anyị nyocha oge niile na mpaghara ha ma na-enye ya nri na etiti. Ọ bụ ha na-ahụ maka ịgwa anyị. Otú ọ dị, ha enweghị ike iburu ngwá ọgụ ma maa ndị mmadụ ikpe. ”
Ka Arapaja na-eduga PDP Southwest, nchegbu banyere Fayose gambit na-etolite. April 25, 2021
Ndị na-azụ Fulani na-echepụta ụzọ ọhụụ ga-esi banye na Ndịda - Amotekun Nwere ike 5, 2021
N'ihe NSA chọrọ, a ga-emechi uwe nchebe niile na-akwadoghị ozugbo June 6, 2021
Enweghi obi abụọ banyere onye na-akpata ọgụ South-East - Enweghị nchekwa. April 23, 2021
Buhari na-atụ ụjọ na ọgbaghara Chad nwere ike ime ka nchekwa Naịjirịa ka njọ April 21, 2021
Nnukwu enweghị nchekwa abụghị ihe ọhụrụ na Naịjirịa: Lai Mohammed April 19, 2021
Tags:adeyeye, ajayi, akeredolu, Alhaji, égbè ezu ohi, babajide akwụ-olu, kọmịshọna ndị uwe ojii, onye na-akpọkọta, fg, ibarapa, ijebu, ike, ilesha, imeko, ọkwakia, mkpọchi, ezi Chineke, ndị otu ndị ọrụ njem n'okporo ụzọ, olayinka, olu, ọgbakọ ndị oodua, sagamu, akwụ ụgwọ, akwụ-olu